Teflon Tape, uphawu Tape, Pump Seal, Ptfe Teflon Tape, Ptfe Teflon - Ubungane Okuphakade
ptfe itheyiphu ongenisa india
ephelele Teflon tape
imikhiqizo baningi india
Kususelwa umkhiqizo, PTFE fiberglass emakethe iye ihlukene kanengi zibe izindwangu, amakhasethi, amabhande, izintambo, imicu, futhi lokuluhlaza. Imicu ezenziwe fiberglass PTF baqashwe ukuthuthukisa sewability futhi ukunciphisa ukuhilizisana. Kuyinto u ...
Rolls of 100% okumsulwa-non-sintered PTFE itheyiphu wenze ephelele uphawu oluhlala isikhathi eside kunoma iyiphi ubukhulu nohlobo ngentambo. Tape akusho lukhuni iphinde ivimbele ekuthatheni Izinyunyana nemishudo. imiqulu asezingeni futhi availab ...